Xulka Qaranka Soomaaliya oo laga soo sagootiyay Kampala | Somali National Television - sntv.so
Home CIYAARAHA Xulka Qaranka Soomaaliya oo laga soo sagootiyay Kampala
Munaasabad isugu jirta Casho sharaf iyo sagootin isugu jirta ayaa xulka Qaranka Soomaaliya oo ka qeyb galayay Koobka Bariga iyo bartamaha Afrika Xalay loogu sameeyay Magaalada Kampala ee Dalka Yugaandha.
Munaasabadan ay soo abaabuleen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee Magaalada Kampala ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxda Ururka ciyaaraha Soomaalida ee Uganda, ganacsato iyo Guddoomiyaha xariirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed, Cabdiqani Saciid Carab.
Qaar ka mid ah madaxda Jaaliyadda ayaa uga hambalyeeyay xulka Qaranka dedaalkii ay sameeyeen intii ay ciyaarayeen iyo sidii ay kor ugu qaadeen sumcadda Soomaaliya.
Cumar Cabdullaahi, oo ah ciyaaryahankii dhaliyay Goolkii ay Soomaaliya uga badisay xulka Burundi oo ka hadlay Casha sharafta ayaa si guud ugu mahad-celiyay Soomaalida ku nool Uganda sidii qiima badnayd ee ay u Garab istaageen markii ay baratanka kula jireen kooxihii kale.
Cabdiqani Saciid Carab, Guddoomiyaha xiriirka Kubadda Cagta ayaa sheegay in waajibkii lagu lahaa Jaaliyadda iyo taageeradii ay u muujiyeen xulkooda ay kasoo baxeen.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in ciyaarahii Soomaaliya ay la wadaagtay kooxaha kale ay ka xiiso badnaayeen kuwa Dalalka kale ciyaarayeen oo Soomaaliya marka ay ciyaaraysay garoonka lasoo buuxinayay oo ticket aad u badan la iibsaday.
Waxana taasi ammaanay maamulka Koobka Bariga iyo bartamaba Afrika sida Jaaliyadda Soomaalida ay xulkooda u taageereen.
Maanta ayaa la filayaa in ay Ciyaartooyda xulka Qaranka Soomaaliyeed ku kala laabtaan Dalalkii ay ka kala yimaadeen.
Previous articleDood-cilmiyeed ku saabsan nidaamka federaalka oo lagu qabtay Madaxtooyada Qaranka
Next articleCiidanka xoogga Dalka oo la wareegay Tuulooyin hoos taga Cadale